Imbali yeTrivishini yeTV
Ngubani owafaka umbala weTV
I-patent yaseJamani iqulethe isiphakamiso sokuqala sombala we-TV.
Ukukhankanywa kombala kumabonwakude kummandla we-1904 waseJamani umenzi we-TV. Ngowe-1925, umqambi waseRashiya uVladimir K. Zworykin naye wabonisa ukuveliswa kwephepha lobume kwinkqubo yonxibelelwano yombala wekhompyutha. Nangona zombini ezi zinto zingayiphumelelanga, zaziyiziphakamiso zokuqala zomboniso wombala we-TV.
Ngethuba elithile phakathi kowe-1946 no-1950, abasebenzi bophando be-RCA Laboratories baqulunqa uhlelo lokuqala lwe-electronic, umbala we-TV.
Inkqubo yemiboniso yembala ephumelelayo esekelwe kwinkqubo eyenzelwe ngu-RCA yaqalisa ukusasazwa kwezorhwebo ngomhla kaDisemba 17, 1953.
Kodwa phambi kweRCA, abaphandi be-CBS baholwa nguPeter Goldmark baqulunqe inkqubo yechungechunge lombala we-color based based on 1928 designs of John Logie Baird. I-FCC igunyazisile ubuchwepheshe be-TV yobude be-CBS njengomgangatho welizwe ngo-Oktobha ka-1950. Nangona kunjalo, inkqubo ngexesha elo yayinobunzima, uphawu lomfanekiso lwaluyingozi yaye i-teknoloji yayingqinelani neeseti zangaphambili ezimnyama namhlophe.
I-CBS iqalile ukusasazwa kombala kwizikhululo ezinxweme ezihlanu zasempuma ngoJuni ka-1951. Nangona kunjalo, i-RCA yasabela ngokumisela ukuyeka ukusasazwa koluntu kweenkqubo ze-CBS. Ukwenza izinto zibe zibi ngakumbi kukuba kwakukho i-TV ze-black-and-white (10.5 million million) zee-TV (iinqununu zeRCA). Imveliso yomabonwakude yamiswa kwakhona ngexesha lemfazwe yaseKorea.
Ngeengxaki ezininzi, inkqubo ye-CBS yahluleka.
Lezo zinto zanikezela i-RCA ngexesha lokuyila umboniso ogqithiseleyo kumabonakude, ewasekelwe kwi-application ye-patent ye-Al47 Schroeder ye-patent ye-1947. Inkqubo yabo idlulisele imvume yeCCC ngasekupheleni kwe-1953 kwaye ukuthengiswa kwee-TV ze-RCA kwaqala ngo-1954.
Ixesha elifutshane loThutho lweTV
I-telecasts yombala yokuqala ingagcinwa kuphela kwinkqubo yekinescope emnyama neyemhlophe eyenziwe ngo-1947.
Ngama-1956, i-NBC yaqala ukusebenzisa ifilimu yombala ukulibazisa ixesha kwaye igcina ezinye zee-telecasts. Inkampani ebizwa ngokuba yi-Ampex yenza umbala we-recorder ye-videotape ngo-1958 kwaye i-NBC yayisebenzisa ukuyifaka i-Evening Evening kunye noFred Astaire, umbala omdala okhulayo womnatha wevidiyo.
Ngomnyaka we-1958, uMongameli uDwight D. Eisenhower watyelela isiteshi se-NBC eWashington, DC kwaye wanika intetho exoxa ngokufaneleka kwetheknoloji entsha. Intetho yakhe yabhalwa ngombala kwaye ikopi yale vidiyo yanikezelwa kwiThala leNkcazo.
I-NBC yenza umbala wokuqala wokunxweme ukuya kumanxweme xa usasaza i-Tournament yeRoses Parade ngoJanuwari 1, 1954.
Inkulumbuso yelizwe elimangalisayo loMbala weMbala ngoSeptemba 1961 yenze into eguqukayo eyabangela ukuba abathengi baphume baze bathenge iithelevishini zemibala.
Izikhululo zokusasazwa kweThelevishini kunye neenethwekhi kwiindawo ezininzi zehlabathi eziphucukisiwe kumabonakude amnyama kunye namhlophe ukuze kuhanjiswe umbala kuma-1960s no-1970.
Ngowe-1979, neyokugqibela yalezi ziguqukile zibe ngumbala kwaye ngasekuqaleni kwee-1980, iiseti ezimnyama nezibomhlophe zincinci zincinci eziphathekayo okanye ezo zisetyenziswe njengemifanekiso yokujonga i-video kwizinto eziphantsi kweendleko zabathengi. Ngasekupheleni kweminyaka ye-1980, le mimandla iguqulelwe kumatshini ombala.
Ihlathi leMarta kunye neMbali yeM & Ms Candies
Ngubani owasungula iChina?
Imbali ye-Toaster yakho
Iinkcazo zeNzululwazi nezeNtlalo zoRace
Isingeniso kwi-Cast-Iron Architecture
I-Illinois Salvage Title Law
I-Nian - Umkhosi we-Chinese Spring
Uluhlu lokuHlola lwegrama
I-Laika, iSilwanyana sokuQala kwi-Space Out
Slip Screen Pressures Cornerbacks
Yayiphi Inkqubo ye-Bone-rank?
Indlela yokuHlulwa kweNqweliso yeCar
Iphrofayili kaJodi Arias kunye noMbulali we-Travis Alexander
Yintoni iBrit Milah (Bris)?
Iingqununu ezinkulu kakhulu zabemi
IThe Legend of Apple Logo
Inkqubo yoNcedo lweMali ye-MCAT (FAP)
Ukubetha i-Pick 3
Ikholeji ye-Hood ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
Imfazwe Yehlabathi I: USergeant Alvin C. York
Ingaba i-compress ye-tarjeta de residencia permanent en EE.UU?
Amalungelo abesithandana kunye namaGay 101
Yiyiphi inqaku elifutshane?
Ukunikezela Ngasandla Ukunyusa abantwana abaneziphene
I-Recell Jell-O ekhanyayo
Ulwimi lweeNtlanzi - uPeter Piper
I-Icebreaker Imidlalo: I-Icebreaker yeqela
I-Acupressure Treasures - Feng Chi - Gallbladder 20
U-Isabella wasePortugal (1503 - 1539)